Arsenal Oo Haatan Si Dhab Ah U Gashay Suuqa, SADDEX Kooxood Oo Waaweyn Oo Ay Kaga Horreeyaan Saxeexa Xiddig Real Madrid Ah & Wakhtiga Ay Dhammaystiri Karto. - Gool24.Net
Arsenal Oo Haatan Si Dhab Ah U Gashay Suuqa, SADDEX Kooxood Oo Waaweyn Oo Ay Kaga Horreeyaan Saxeexa Xiddig Real Madrid Ah & Wakhtiga Ay Dhammaystiri Karto.
Kooxda tababare Unai Emery ee Arsenal ayaa u muuqata mid haatan si dhab ah suuqa kala iibsiga uga arrinsanaysa waxaana ay wada xaajood la bilaabeen dhigooda Real Madrid oo ay ka doonayaan saxeexa Lucas Vazquez.
Arsenal oo aad moodo mid uu ka go’anyahay heshiiskani ayaa xilli horeba miiska saartay dalab €35 Milyan ah si ay si dhakhso ah ugu dhammeeyaan heshiiska.
Wargeyska fadhigiisu yahay Madrid ee AS ayaa dhinaca kale sheegay in wadahadaladan lasoo af-meeri karo toddobaadka soo socda isla markaana uu Vazquez isla wakhtigaasba noqon karo xiddig Gunners ah.
Vazquez ayay ka go’antahay inuu usoo dhaqaaqo horyaalka Premier League waxaana uu doonayaa inuu xulkiisa Spain boos ka helo tartanka EURO 2020 isaga oo Emirates Stadium u arka meesha ku haboon.
Dhinaca kale iyadoo ay dhawaan Santiago Bernabeu soo gaadheen xiddigaha kala ah Eden Hazard iyo Luka Jovic ayay u badantahay in 28 jirkani uu kursiga keydka la deris noqon doono xilli ciyaareedka dambe haddii uusan haatan koox cusub raadsan.
Waxa intaas dheer in Los Blancos ay baahi weyn u qabaan inay iska iibiyaan xiddigo safkooda ah si ay u helaan lacag ay markale ku sameeyaan saxeexyo waaweyn.
Kooxda Unai Emery ayaan kali ku ahayn tartanka Vazquez balse waxa ay loolan kala kulmaysaa Bayern Munich, Inter Milan iyo Paris Saint-Germain walow ay iyagu u muuqdaan kuwa gacanta sarreeya.
Lucas Vazquez ayay wararku intaas ku darayaan inuu la fadhiistay tababare Zinadine Zidane isaga oo u sheegay in Arsenal uu u arko kooxda ugu haboon ee uu ku gaadhi karo hammigiisa dhaw ee kubadda cagta.
Lacagtan ayaa marka Pound loo bedelo kaliya noqonaysa £28.7 Milyan oo ay Arsenal hore u qadimayso iyo 2,7 Milyan qoddobo kala duwan ku xidhnaan doona taas oo la micno ah inuu ku qiimaysan yahay wax ka yar kala badhka Wilfred Zaha oo ay Arsenal ka doonaysay Crystal Palace.